Iimpazamo eziqhelekileyo Amashishini enza xa ekhetha iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa | Martech Zone
A iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa (MAP) yiyo nayiphi na isoftware ehambisa imisebenzi yentengiso. Amaqonga ahlala ebonelela ngeempawu zokuzenzekelayo kwi-imeyile, kwimidiya yoluntu, ukukhokelela kuhlobo, iposi ethe ngqo, amajelo entengiso edijithali kunye noonxibelelwano. Izixhobo zibonelela ngesiseko sedatha yokuthengisa kulwazi lokuthengisa ukuze unxibelelwano lujolise ekusebenziseni ukwahlulahlula kunye nokwenza ubuqu.
Kukho ukubuya okuhle kutyalo-mali xa amaqonga entengiso azenzekelayo esetyenziswe ngokuchanekileyo nangokupheleleyo; Nangona kunjalo, amashishini amaninzi enza iimpazamo ezisisiseko xa ukhetha iqonga leshishini labo. Nazi ezinye endiqhubeka ndizibona:
Impazamo 1: IMAP ayisiyiyo kuphela malunga nokuThengiswa kwe-imeyile
Xa ukuthengiswa kweqonga lokuzenzekelayo kwaqala ukwenziwa, eyona nto kugxilwe kuyo yayikukuzenzela unxibelelwano nge-imeyile. I-imeyile yitshaneli engabizi kakhulu ene-ROMI enkulu apho amashishini anokulandela kwaye anike ingxelo ngokusebenza kwawo. Nangona kunjalo, i-imeyile ayisiyiyo kuphela indawo ephakathi kwakhona. Ukuthengisa kungokuthumela umthengi olungileyo umyalezo olungileyo ngexesha elifanelekileyo- kunye nee-MAP zenza oku.
Umzekelo: Kutshanje ndincedise umthengi ukuba aqhube i-webinar yabo esebenzisa iqonga labo lokuthengisa. Ukusuka kubhaliso lwangaphambi komsitho, ukungena ngosuku lomnyhadala, ukuya kulandelelo lwasemva kwesiganeko- yayiyinkqubo ezenzekelayo kuzo zombini i-imeyile kunye nemijelo yeposi ethe ngqo. Iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa nge-imeyile lilodwa alizukunceda ukuhlangabezana neenjongo zethu.
Impazamo 2: Imephu ayihambelani neenjongo zokuthengisa ngokubanzi
Kwiminyaka yam yamava okusebenza ngokusondeleyo kunye nabaxumi, umthengi ngamnye uneengcinga zakhe kukhetho lweqonga labo. Rhoqo, umthathi-zigqibo wenqanaba le-C wayexhomekeke kakhulu kwiindleko zeqonga kwaye ayikho enye into. Kwaye xa kuphicothwa isitaki sazo setekhnoloji yentengiso, sichonge apho amaqonga ayengasetyenziswanga khona - okanye kakubi - engasetyenziswa kwaphela.
Into yokuqala ekufuneka ihlale ibuzwa xa ukhetha i-MAP yile:
Zithini iinjongo zakho zokuthengisa kwiinyanga ezi-3?
Zithini iinjongo zakho zokuthengisa kwiinyanga ezi-12?
Zithini iinjongo zakho zokuthengisa kwiinyanga ezi-24?
Ukuzenzekelayo kwentengiso ayilogama le-buzz okanye ayiyimbumbulu yesilivere. Isixhobo sokukunceda ekufezekiseni iinjongo zakho zokuthengisa. Ke ngoko, soloko ucela into oyifunayo ukufezekisa kwaye usete i-MAP yakho ukuze ihambelane ngokuthe ngqo neenjongo zakho zokuthengisa kunye nokulinganisa izikhombisi zentsebenzo eziphambili (KPIs).
Umzekelo: Umthengi we-e-commerce ufuna ukonyusa ingeniso ngamajelo e-imeyile kuba ngala majelo eshishini alisebenzisayo ngoku kwaye anedatha enkulu. Basenokungafuneki ukuzenzekelayo ... umboneleli ngeenkonzo ze-imeyile (i-ESP) edityaniswe nengcali yokuthengisa nge-imeyile enamava inokuthi ikwazi ukufikelela kuzo zonke iziphumo. Yeyiphi inqaku lokuchitha ngaphezulu kwamaxesha ama-5 kuhlahlo-lwabiwo mali lokusebenzisa iMP ukwenza into efanayo?
Impazamo 3: Iindleko zokuphunyezwa kwe-MAP zithathwa kancinci
Lwazi kangakanani iqela lakho? Italente inokuba yeyona nto ibaluleke kakhulu xa utyala imali kwi-MAP, kodwa iyahoywa ngamashishini amaninzi enza ukhetho. Ukufezekisa iinjongo zakho zokuthengisa, udinga umntu onokulawula ngokupheleleyo iqonga kwaye enze iphulo lakho ngalo.
Ngaphezulu kwesiqingatha sabathengi bam bakhethe iqonga ngaphandle kwetalente yangaphakathi ukuze bayisebenzise. Ngenxa yoko, bagqibela ngokuhlawula iarhente yokuthengisa ukuze bayilawule. Ezi ndleko zinciphisa ukubuyela kutyalo-mali kwaye zinokuyenza ilahleko. Iiarhente zihlala zikulungele ukukunceda ngokuphunyezwa kwe-MAP, kodwa lixabiso eliphezulu kakhulu kumashishini amancinci ukuya kubukhulu obuphakathi ukuze ubasebenzise ngokuqhubekayo.
Amanye amashishini akhetha ukukhulisa izakhono kwiqela labo elingaphakathi endlwini. Ngexesha lenkqubo yohlahlo-lwabiwo mali, abaninzi bayalibala ukucwangcisa iindleko zoqeqesho kuhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa. Isisombululo ngasinye sifuna izakhono ezibalulekileyo; Ke ngoko, iindleko zoqeqesho ziyahluka. UMarketo, umzekelo, isisombululo esisebenziseka lula kunye neendleko zoqeqesho ezisisiseko malunga ne- $ 2000 AUD e-Australia. Ngenye indlela, uqeqesho lokuThengiswa kweLifu lokuThengisa lusimahla Inqanawa yomzila.
Qwalasela iindleko zeaseti yakho kunye noqeqesho lwabo xa usenza isigqibo kwiqonga.
Impazamo 4: Ukwahlula-hlulwa kwabaxumi beMAP akusetyenziswanga
Imephu inokwahlulahlula ithemba lakho kunye nabathengi nangayiphi na indlela oyifunayo. Oku ayisiyiyo kuphela imiba yedatha onayo, kodwa ikwajolisa ngokuchanekileyo apho umthengi ekuhambo okanye kwintengiso yobomi bayo. Ukuthumela umyalezo ochanekileyo ngexesha elichanekileyo kuxhomekeke kwindlela abaziphethe ngayo abathengi kuyonyusa ixabiso lomthengi… uqhuba ukonyuka kwe-ROI yakho.
Ukongeza, uninzi lwabathengisi be-MAP benza uvavanyo lwe-A / B ukuphucula iziphumo zomkhankaso. Oku kuyakwandisa iziphumo zakho zentengiso… ngokuphucula ixesha kunye nemiyalezo oyithumela kumthengi wakho. Ukujolisa kumacandelo abathengi kunye nokuziphatha kwabo, kunye nokwahlula iqela ngalinye labantu kuya kuthatha ithuba umahluko wokuziphatha kubo bonke abathengi.
Ukukhetha isisombululo esifanelekileyo se-MAP akukaze kube lula kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngaphaya kwexabiso leqonga. Ewe, zininzi ezinye izizathu zokuba utyalo-mali lwakho lweMP lusenokungazisi… kodwa ke ezi mpazamo zixhaphakileyo ziya kuphucula amathuba akho okuqonda ngokupheleleyo utyalomali lwakho!
Ukuba ufuna olunye uncedo ekukhetheni enye, nceda fikelela kwaye siyonwabile ukukunceda.
tags: Ukuziphatha kwabathengii-imeyile ezenzekelayoi-email automationukuzenzekelayo kwentengisoizikhombisi zomsebenzi eziphambiliimephuiqonga lokuzenzekelayo lokuthengisaUqeqesho lweNtengisourhwebo mobileROI
UBob Croft ngamava enkokeli ye-martech kwingingqi ye-APAC, esebenza nabathengi abangaphezulu kwe-15 kule minyaka ili-8 idlulileyo kumashishini amaninzi.
Uyinyusa njani intengo yakho yokuThengwa kweNtengiso ngesiCwangciso sokuGcina abaThengi esisebenzayo
Ukuvuza: Yintoni uMphathi weCommerce Relationship Manager (ECRM)?